News | एलोभेरा
News | Tag: एलोभेरा
यसकारण बिहान खालीपेटमा एलोभेराको जुस पिउने
काठमाडौं । एलोभेरा एक औषधिय गुण हुन्छ । विहान खाली पेटमा एलोभेराको जुस पिउँदा हाम्रो शरीरलाई विभिन्न किसिमबाट फाइदा हुन्छ । त्वचा र स्वास्थ्यको लागि एलोभेराको जुस निकै उपयोगी मानिन्छ ।
यसकारण एलोभेरा जुस पिउने
काठमाडौं । घिउकुमारीका करिब दुई सय ५० प्रजातिमध्येको एलोभेरा एक हो । यसमा औषधीय गुण हुन्छ । एलोभेराको जुस प्रायःको रोजाइमा पर्ने गर्छ । यसको जुसको सेवनले हाम्रो शरीरमा विभिन्न फाइदा गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा एलोभेरा बन्न सक्छ विष
हामीले एलोभेराको फाइदाबारे मात्र सुन्दै धेरै आएका छौं । यो बहुउपयोगी चिज हो । तर, तपाईलाई यसको बेफाइदाको बारेमा थाहा नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा यसले विषको काम समेत गर्छ ।
ग्यास्ट्रिकको उपचारमा ‘एलोभेरा’ अमृत समान
काठमाडौं । पेटमा हल्का जलन हुनुदेखि लिएर एकदमै पिडा दिनेसम्म ग्यासको असर हुने गर्छ । ग्यास्ट्रिकले लगभग हरेक व्यक्तिलाई सताउँछ । यसबाट कैयौं नेपालीहरु पीडित छन् । हाम्रो खानपानले गर्दा पनि पेटमा ग्यास जम्मा हुने गर्छ । यसको समाधानका लागि कैयौं उपायहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये आज एलोभेरा अर्थात घ्युकुमारीको प्रयोगले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।
एलोभेराको जुस पिउनुहोस् र विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउनुहोस्
यस कारण एलोभेराको जुस पिउनुपर्छ
विहान खाली पेटमा एलोभेराको जुस पिउँदा यस्तो फाइदा !
एलोभेरा जुसका फाइदा
एलोभेरा घिउकुमारीका करिब दुई सय ५० प्रजातिमध्ये एक हो । यसमा औषधीय गुण हुन्छ । एलोभेराको जुस प्रायःको रोजाइमा पर्ने गर्छ । यसको जुस सेवनले हाम्रो शरीरमा विभिन्न फाइदा गर्छ ।
२६ वर्षपछि देखियो पोखरीमा डुबेको गाउँ !
एजेन्सी । पोखरीमा डुबेको एउटा गाउँ २६ वर्षपछि देखिएको छ । इटाली सरकारका अनुसार यो वर्षको अन्त्यसम्म वा अर्को वर्षको सुरुवातमा यो मध्यकालिन गाउँ देख्नकालागि पर्यटकहरुलाई अनुमित दिइनेछ ।